काठमाडौंमा संक्रमण बढेको बेला हतारोमा सार्वजनिक सवारी खुला – Khabar Silo
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै यसले संक्रमणको जोखिम पनि बढाएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी गराएका थिए।
उपत्यकामा भने तीन जिल्लामै सवारीसाधन एकअर्को जिल्लामा जान सक्ने भनिएको छ। उपत्यकामा ठूलो जनघनत्व रहेकाले यहाँ सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेर जान्छ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले यहाँ संक्रमण कुन अवस्थामा छ भन्ने कसैले आँकलन गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका विज्ञ समूहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अलिक हतारो नगरेको भए हुन्थ्यो। कम्तीमा साउनको ७ गतेसम्म यसलाई रोक्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।’
मन्त्रालय अहिले उपत्यकामा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै त्यसको नतिजाले यस्तो निर्णय लिँदा ठूलो सघाउ पुग्ने उनको तर्क छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने निर्णय हडबडमा लिएको देखिन्छ।
यो निर्णय लिनुपूर्व कुनै पनि विज्ञहरूसँग औपचारिक छलफल गरिएको छैन। ‘हामीसँग पनि कुनै छलफल भएन। सायद यातायात संगठनहरूको प्रेसर थेग्न नसकेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएको हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा निश्चित दूरी कायम गर्ने, आधा यात्रु मात्र राख्न पाउनुपर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएपनि त्यसको निगरानी चुस्त हुनेमा शंका छ।
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, ‘यो निर्णय ठिक हो वा हैन भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिँदा यसको निगरानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।’
उनले उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर एकीन गर्न ४५ हजार बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्ने तयारी रहेको जनाए। त्यसका लागि विभिन्न वडाहरूसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताए।
‘पछिल्लो समय उपत्यकामा समुदायमै संक्रमण गएको हो कि भन्ने विषय चर्चामा आइरहँदा त्यसको एकीन गर्न पनि हामी समुदायमै गएर ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्दैछौं,’ उनले भने।
सरकारलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सल्लाह दिने मुख्य भूमिकामा रहेका एक चिकित्सकले पनि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा यसले त्यति नै संक्रमणको जोखिम पनि बढाएको बताए।
उनले यो निर्णय गरिरहँदा सरकारले अन्य सावधानी र निगरानीका कुरालाई पनि त्यति नै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने जनाए। ‘हामीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने त भनेका छौं तर त्यो सँगै कडा निगरानी गर्न सकेनौं भने हामी फेरी घातक काम गर्दैछौं,’ उनले भने।
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएपछि धेरै भीड हुने र त्यसले जोखिम पनि धेरै बढ्नेमा उनी पनि सहमत छन्। उनले सरकारले मापदण्ड पालना भएको/नभएको निगरानी गर्न नसके संक्रमण ह्वात्तै बढ्ने र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बताउँछन्।
‘त्यसैले संक्रमण अवस्थालाई लिएर सरकारले प्रत्येक हप्ता निर्णय उल्टाउन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने। सरकारले सार्वजनिक यातायात शुक्रबारबाट सञ्चालन गर्नसक्ने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायी महासंघले सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
अहिले व्यवसायीहरु कसरी यातायात सञ्चालनमा ल्याउने भनेर छलफल गरिरहेका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन पनि उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढेको बताउँछन्। अब काठमाडौंले कोरोनासँग निर्णायक लडाइँ लड्नुपर्ने स्थिति आएको उनको बुझाइँ छ।
उनले उपत्यकामा बाहिरबाट आउने मानिसहरूको संख्या पनि बढेको र उनीहरू सबैको परीक्षण नभएको हुँदा थप जोखिम बढेको बताए। यस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउँदा त्यसले अर्को जोखिम थपेको उनी बताउँछन्। त्यसैले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा चालक वा यात्रुले केही अनिवार्य नियम पालना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यात्रुहरूले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने, धेरै भिडभाड नगर्ने, चर्को आवाजमा कुरा गर्न नहुने डा. पुन सुझाउँछन्। चर्को आवाजमा कुरा गर्दा थुकको छिटाहरूबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना हुँदा सचेत रहन उनको आग्रह छ। डा. पुनले सरकारले जारी गरेको ‘कोभिड-१९ टेस्टिङ’ सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले पनि संक्रमण फैलाउन सघाउ पुर्याउने बताए।
उक्त निर्देशिकामा लक्षणविहीन व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न नपर्ने भनिएको छ। यसमा फरक मत राख्दै उनी भन्छन्, ‘अधिकांश संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको छैन। यसरी बाहिरी जिल्लाहरूबाट आएका मानिसहरू संक्रमित भएपनि उनीहरूमा लक्षण देखिँदैन। तर निर्देशिका अनुसार भन्दै उनीहरूको परीक्षण हुँदैन र उनीहरू समुदायमा घुलमिल हुनसक्छन्। जसले गर्दा संक्रमण सर्ने संम्भावना हुन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले बाहिरी जिल्लाहरूबाट आएका व्यक्तिहरूलाई लक्षण छैन भने पनि १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्न भनेको छ। यद्यपी उनीहरू घरमा बसे वा बसेनन् भन्ने कुरा निगरानी राख्ने कुनै संयन्त्र छैन।
पछिल्लो समय झन् उपत्यकामा कतै नगएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि संक्रमण समुदायमै गइसकेको हुनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ। विभिन्न ठाउँका मानिसहरूमा संक्रमण देखिन थालेपछि मन्त्रालयले परीक्षणलाई थप व्यापक बनाउने तयारी गरेको हो।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने ढिलो चाँडो संक्रमण समुदायस्तरमा जाने बताउँदै आएका छन्। त्यसैले अब भाइरससँगै लड्दै अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपालीमा घिउ फल भनिने एभोकाडो भलै २०२८ सालमा नेपाल भित्रिएको भने पनि हालसम्म नेपालमा सर्वपरिचित फल होइन । धनकुटाको पाख्रीबासमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुभन्दा अघि नै २०२८ सालमा सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा ब्रिटिसहरूले यसलाई नेपाल भित्र्याएका हुन् । त्यही कारण सुरुमा धनकुटामै धेरै एभोकाडो फलाइयो र यहीँबाट यसको प्रचार-प्रसार थालियो । यो गुणकारी फललाई देशभर फैलाउन […]
मलेसिया’बाट आयो यस्तो खुसी’को खवर !
काठमाडौँ, असार २४ गते । मलेसि’यामा गैरकानुनी रूपमा काम गरि’रहेका नेपाली श्रमि’कलाई निश्चित जरि’वाना तिरेर घर फर्कन पाउ’ने समय थप भएको छ । मलेसियास्थित नेपा’ली दूतावा’सका अनुसार मलेसिया’ले गैरकानुनी श्रमिकका लागि सञ्चा’लन गरिरहेको रिक्यालि’ब्रेसन कार्यक्रमको समय पुस १६ स’म्मका लागि थपेको हो । यो समय अ’सारको मध्यमा सकिएको थियो । यसबीच’मा कोरोना’का कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान […]
कैलालीमा मास्क नलगाउने ४ हजार बढीलाई कारबाही
धनग ढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा तीन दिनको अवधिमा मास्क नलगाउने ४ हजार बढीलाई कारबाही गरिएको छ । कैलालीमा बिहीबार एक हजार पचास, शुक्रबार एक हजार पाँच सय ३७ र शनिबार एक हजार पाँच सय बढीलाई कारबाही गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए । ‘मास्क नलगाई हिँड्नेलाई होल्ड गरेर सम्झाई-बुझाई गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने। […]